Dambudziko rakakura remhashu (1-14)
“Zuva raJehovha rava pedyo” (15-20)
Muprofita wacho anochema kuna Jehovha (19, 20)
1 Iri ndiro shoko raJehovha rakauya kuna Joeri* mwanakomana waPetueri: 2 “Inzwai izvi, imi vakuru,Uye teererai, imi vagari vese vemunyika.* Zvinhu zvakadai zvakamboitika here mumazuva enyuKana mumazuva emadzitateguru enyu?+ 3 Zviudzei vanakomana venyu,Uye vanakomana venyu ngavazviudze vanakomana vavo,Uye vanakomana vavo vozviudza chizvarwa chinotevera. 4 Zvakasiyiwa nemhashu dzinoparadza, zvakadyiwa nemhashu dzinobhururuka dzakawanda;+Uye zvakasiyiwa nemhashu dzinobhururuka dzakawanda, zvakadyiwa nemhashu dzisina mapapiro;Uye zvakasiyiwa nemhashu dzisina mapapiro, zvakadyiwa nemhashu dzinodya dzisingasiyi chinhu.*+ 5 Mukai, imi zvidhakwa,+ mucheme misodzi! Ridzai mhere imi mese munonwa waini,Nekuti hamusisina waini inotapira.+ 6 Nekuti pane rudzi rwauya munyika yangu, rune simba uye rusingaverengeki.+ Mazino arwo akaita semazino eshumba,+ uye shaya dzarwo dzakaita sedzeshumba. 7 Rwaparadza muzambiringa wangu uye rwaita kuti muonde wangu uve chigutsa,Rwachenesa miti yacho zvachose rukaikandira kwakadaro uko,Rukasiya tumapazi twayo twava tuchena. 8 Ridzai mhere sezvinoita mhandara yakapfeka masagaIchichema mukomana anga achida kuiroora.* 9 Muimba yaJehovha hamusisina mupiro wezviyo*+ nemupiro wezvinwiwa;+Vapristi, ivo vashumiri vaJehovha, vari kuchema. 10 Munda waparadzwa, ivhu riri kuchema;+Nekuti zviyo zvaparadzwa, waini itsva yaoma, mafuta apera.+ 11 Varimi vari kunetseka, vashandi vemuminda yemizambiringa vari kuridza mhere,Pamusana pegorosi uye pebhari;Nekuti mbeu dzemuminda dzaparara. 12 Muzambiringa waoma,Muonde waoma. Mupomegraneti,* muchindwe, nemuapuro,Miti yese yemumunda yaoma;+Nekuti mufaro wevanhu wachinja kuva nyadzi. 13 Pfekai masaga, mucheme,* imi vapristi;Ridzai mhere, imi vashumiri vepaatari.+ Pindai mukati, murare makapfeka masaga, imi vashumiri vaMwari wangu;Nekuti mupiro wezviyo+ nemupiro wezvinwiwa+ hazvichaunzwi muimba yaMwari wenyu. 14 Zivisai vanhu kuti vatsanye;* shevedzai vanhu kuti vauye kugungano dzvene.+ Unganidzai vakuru, nevagari vese vemunyika,Kuimba yaJehovha Mwari wenyu,+ muchemere kubatsirwa naJehovha. 15 Maiwee zuva riya kani! Nekuti zuva raJehovha rava pedyo,+Uye richauya nekuparadza kunobva kune Wemasimbaose! 16 Zvekudya hazvina kubviswa pamberi pedu chaipo here,Uye kupembera nemufaro hazvina kubviswa muimba yaMwari wedu here? 17 Mbeu dzavari kushanda padziri nefoshoro dzavo, dzaputana.* Matura haasisina chinhu. Tsapi* dzaputswa, nekuti zviyo zvaoma. 18 Kunyange zvipfuwo zviri kugomera! Mombe dziri kumberereka, nekuti hadzina mafuro! Uye makwai ari kurwadziwa. 19 Ndichachema kwamuri haiwa Jehovha;+Nekuti moto waparadza mafuro musango,Uye rimi remoto rapisa miti yese yesango. 20 Kunyange mhuka dzesango dzinochema kwamuri,Nekuti hova dzemvura dzaomaUye moto waparadza mafuro musango.”
^ Kureva kuti “Jehovha ndiMwari.”
^ Kana kuti “vepanyika.”
^ Muvhesi ino mutauro wechiHebheru wakashandisa mazita mana anotsanangura mhashu.
^ Kana kuti “Ichichema murume weudiki hwayo.”
^ Kana kuti “muzvirove zvipfuva.”
^ ChiHeb., “Tsaurai nguva tsvene yekutsanya.”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “Maonde akaoma avari kushanda paari nefoshoro dzavo aputana.”